शेयर धितोमा वाणिज्य बैङ्कको रू. ३३ अर्ब लगानी : क्षमताभन्दा ३५% कम शेयर धितो कर्जा प्रवाह | गृहपृष्ठ
Home शेयर धितोमा वाणिज्य बैङ्कको रू. ३३ अर्ब लगानी : क्षमताभन्दा ३५% कम शेयर धितो कर्जा प्रवाह
शेयर धितोमा वाणिज्य बैङ्कको रू. ३३ अर्ब लगानी : क्षमताभन्दा ३५% कम शेयर धितो कर्जा प्रवाह
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार वाणिज्य बैङ्कहरूले शेयर धितोमा रू. ३३ अर्ब १ करोड कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यो अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा ३ दशमलव २६ प्रतिशत कम हो । अघिल्लो आवको असार मसान्तसम्ममा यी बैङ्कले शेयर धितोमा रू. ३४ अर्ब १३ करोड लगानी गरेका थिए । नेपाली धितोपत्र बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक सुस्त भइरहेको बेला शेयर धितोमा कर्जा पनि घटेको पाइएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले शेयरको धितोमा जाने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्राथमिक पूँजीको २५ प्रतिशत रकमसम्म मात्र प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था छ । यस कारण शेयरबजार ओरालो लाग्यो र शेयरको धितोमा जाने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा पनि कमी आएको हो । शेयर बजार घटिरहेको समयमा बैङ्कहरूले जोखीम लिन नचाहेपछि यस्तो कर्जामा लगानी घटेको देखिन्छ ।
बैङ्कहरूले शेयर धितोमा आफ्नो क्षमताको ६५ दशमलव शून्य ५ प्रतिशत मात्र कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन् । यी बैङ्कले अझै ३५ प्रतिशत मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्रवाह गर्न सक्छन् । तर, क्षमताभन्दा कम मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन् । सो अवधिमा मार्जिन लेण्डिङमा लगानी बढे पनि यो रकम बैङ्कहरूले प्रवाह गरेको कुल कर्जाको करीब २ प्रतिशत हुन आउँछ । साथै, यो रकम कुल चुक्तापूँजीको १६ दशमलव २६ प्रतिशत हुन आउँछ । उक्त अवधिमा वाणिज्य बैङ्कहरूको कर्जा तथा सापटी २१ दशमलव ७९ प्रतिशत बढेकाले कुल कर्जामा मार्जिन लेण्डिङको अनुपात कमी देखिएको हो ।
गत आवको चौथो त्रैमासमा कुल २८ वाणिज्य बैङ्कहरूमध्ये २५ ओटाले मात्रै मार्जिन कर्जा प्रदान गरेका छन् । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड, नेपाल एसबीआई र कृषि विकास बैङ्कले भने शेयर धितोमा कर्जा प्रवाह गरेका छैनन् । गत आवको दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार मेगा बैङ्कले शेयर धितोमा सबैभन्दा धेरै कर्जा प्रवाह गरेको छ । गत आवको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा यो बैङ्कले यस्तो कर्जा ९ गुणा बढाएर रू. ७१ करोड ४ लाख पुर्‍याएको छ । साथै, सिभिल बैङ्कको शेयर धितो कर्जा करीब ६ गुणा बढेर रू. ७७ करोड ३८ लाख पुगेको छ । तर, रकमको आधारमा भने सिटिजन बैङ्क इण्टरनेशनलले सबैभन्दा धेरै अर्थात् रू. २ अर्ब ८१ करोड मार्जिन लेण्डिङ कर्जा प्रवाह गरेको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा मेगा बैङ्क, सिभिल, माछापुच्छ्रे, नबिल, एनसीसी, सिद्धार्थ, सानिमा, राष्ट्रिय वाणिज्य, नेपाल बैङ्क, सेञ्चुरी र प्रभु बैङ्कबाहेक सबै बैङ्कको यो कर्जा घटेको छ । वाणिज्य बैङ्कले शेयर धितोमा रू. २२ करोडदेखि रू. २ अर्ब ८१ करोडसम्म कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।